Ciidamo gadoodsan oo la Wareegay Koontoroolka Gaalkacyo
You are at:Home»Warkii oo Dhan»Wararka»Ciidamo gadoodsan oo la Wareegay Koontoroolka Gaalkacyo
By Admin on	 April 11, 2021 Wararka
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug gaar ahaan dhinaca Galmudug, ayaa waxaa ay sheegayaan in maanta Ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta Galmudug ay la wreegeen Kantaroollada laga soo galo Magaalada Gaalkacyo.
Ciidanka oo ah kuwo aad u farabadan ayaa waxaa la sheegay inay yihiin kuwo gadoodsan, isla markaana ay ka cabanayaan Mushaar la’aan bilooyinkii ugu dambeeyay soo wajahday oo aysan heli xuquuqdii ay lahaayeen.
Qaar kamid ah Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta, ayaa u sheegay in Ciidanka Daraawiishta Galmudug ay qabsadeen saddexda Koontarool ee laga soo galo koonfurta Magaalada Gaalkacyo oo haatan aysan ku sugan yihiin halkaas.
Sidoo kale dadka ayaa ku warramay in Ciidamada oo ah kuwo wata gaadiidka nooca dagaalka ay xireen isku socodka gaadiidka, isla markaana ay diidayaan in gaadiid ka baxo ama soo galo Magaalada.
Ilaa iyo hadda Saraakiisha Ciidanka Galmudug ayaa ka hadlin Ciidanka la wareegay saakay Kantaroollada laga soo galo Gaalkacyo, hayeeshee waxaa la tilmaamay inay socdaan dadaalo kala duwan oo lagu doonayo in Ciidanka dib loogu celiyo xeryahooda.